वीर अस्पतालले इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्ड सिष्टमको व्यवस्था गर्ने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ वीर अस्पतालले इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्ड सिष्टमको व्यवस्था गर्ने
वीर अस्पतालले इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्ड सिष्टमको व्यवस्था गर्ने
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ साउन १२ गते, १८:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं—वीर अस्पतालले निकट भविष्यमै इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्ड सिष्टम लागु गर्ने भएको छ । आइतबार वीर अस्पतालको १३० औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दैं अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले निकट भविष्यमै इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिष्टमको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
आगामी वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै निर्देशक डा. सेञ्चुरीले निकट भविष्यमा २० बेडको आईसीयु शैय्या सुरु गर्ने पनि बताए । यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल जोड्ने सब–वे बनाउने पनि उनले बताए ।
एक वर्षमा ४ लाख बढीको उपचार
गत वर्ष ४ लाख २२ हजार ८ सय १ जनालाई उपचार सेवा दिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्देशकडा. सेञ्चुरीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
तीमध्ये ३ लाख ७८ हजार २ सय ६५ जनाले ओपीडी र १३ हजार १ सय ५९ जनाले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराएका छन् । ६ हजार १ सय विरामीले आकस्मिक अपरेशन गराएका छन् भने १४ जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ ।
वीरले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८ हजार ९ सय ८ गरिब, असहाय तथा बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको हो । अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निर्देशक सेञ्चुरीले उक्त अवधिमा अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराए बापत ३३ करोड ३६ लाख बराबरको आम्दानी गरेको जानकारी दिए ।
अस्पतालले ३ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा गरेका नागरिकलाई अस्पतालले सेवा दिइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
के भए प्रमुख सुधार ?
—जापान सरकारको संस्था जाइकाको सहयोमा १०० शैयाको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएको
—३ वटा एम्बुलेन्स खरिद् गरी सञ्चालनमा ल्याएको
—अत्याधुनिक ७ तले नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण कार्य जारी